बर्षा संगै परेको चटयाङ्ग लागेर बारामा चार जना महिलाको मृत्यु, १० जना घाइते, (नामसहित )। | संस्कार एफ.एम. ९५.६ मेघाहर्ज
Home स्थानिय बर्षा संगै परेको चटयाङ्ग लागेर बारामा चार जना महिलाको मृत्यु, १० जना घाइते, (नामसहित )।
बर्षा संगै परेको चटयाङ्ग लागेर बारामा चार जना महिलाको मृत्यु, १० जना घाइते, (नामसहित )।
Posted By: sanskar fmon: १८ असार २०७७, बिहीबार ०७:०३ In: स्थानिय
१८ असार कलैया । बारामा चट्याङ लागेर ४ जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार बिहानैदेखि वर्षासँगै परेको चट्याङ लागेर बाराको कलैया उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १२ शीतलपुर र फेटा गाँउपालिका वडा नम्बर १ मा गरी ४ जनाको मृत्यु भएको हो ।
चट्याङ लागेर मृत्यु हुनेमा शीतलपुरस्थित खेतमा रोपाई गरिरहेकी ३५ वर्षीया आशादेवी महतो, ४५ वर्षीया हलिमा खातुन रहेका छन् । त्यसैगरी फेटा गाँउमा एउटा घरमा चटाङ लग्दा एकै घरका ३० वर्षीया ईन्दु देवी महतो र ४० वर्षीया सुनारपति देवी महतोको पनि मृत्यु भएको छ ।
चट्याङ लागेर फेटामा अन्य १० जना घाइते भएका छन् । घाइते हुनेमा फेटा-१ बस्ने ५५ वर्षीया बचनदेवी हजार, ६० वर्षीया राजपतिदेवी, ३५ वर्षीया श्रीकान्ति देवी, ६० वर्षीया उमदेवी ठाकुर, २५ वर्षीया लिलावती देवी, ३५ वर्षीया सोसिता देवी र ६० वर्षीया तिलाकी धोबी रहेका छन् । त्यस्तै कलैया-१० निलकण्ठ बस्ने १२ वर्षीय रंजित कु. कुशवाहा, कलैया-१२ सितलपुरकी ५० रहेका मरियम खातुन र सुवर्ण गाउँपालिका- १ की ३५ रहेका सीमा देवी मुखिया रहेका छन् ।
घाइतेहरुलाई अस्पताल लगिएको र मृतकहरुलाई पोष्टमार्टमका लागि कलैया अस्पतालमा ल्याउने तयारी भईरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय कलैया बाराका प्रवक्ता गाैतम मिश्रले बताउनुभयो ।
स्पेनिस लिगमा रियाल मड्रिडले शिर्ष स्थानको पकड बलियो बनायो ।
कोरोना प्रभावित किसानलाई ब्याजमा छुट, सामान किन्नेलाई बोनस ।